Nahazo Filoha Vaovao Ihany i Madagasikara, Saingy Mbola Manjazozavo Ny Toe-dRaharaha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Janoary 2014 18:24 GMT
Ofisialy ankehitriny fa i Hery Rajaonarimampianina, izay heverina fa nasolo ny Filohan'ny Tetezamita eto Madagasikara teo aloha Andry Rajoelina, izay nanaisotra ny filoha voafidy tamin'ny fomba demokratika farany tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana notohanan'ny miaramila tamin'ny 2009, no nambaran'ny Fitsarana Manokana Momba ny Fifidianana teto Madagasikara (CES) ho mpandresy tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena efa nandrasana hatry ny ela.
Notsipahan'ny CES ny filazana fa nisy ny fangalaram-bato sy ny fitakiana hanisana indray ny vato nataon'ilay kandidà hafa, Jean-Louis Robinson. Niatrika ny fihodinana faharoa ny roa tonta tamin'ny Desambra 2013 rehefa samy tsy nahazo ny maro an'isa mazava tamin'ny fifidianana voalohany tamin'ny oktobra. Nahazo ny 53,49 isanjaton'ny vato tamin'ny fihodinana faharoa Rajaonarimampianina, raha 46,51 isanjato kosa ny an'i Robinson.
Ny kajy tsotra dia manondro fa zara raha voafidy tamin'ny 25 isanjaton'ny mpifidy voasoratra anarana monja Rajaonarimampianina raha alaina ny tarehimarika nalahatry ny Madagascar Tribune [fr]:
Voasoratra anarana: 7.971.790
Vato tsy manankery: 171.790
Taham-pandraisana anjara : 50,72%
Pikantsarin'i Hery Rajaonarimampianina nandritra ny adi-hevitr'ireo kandida ho filoha amin'ny alalan'ny televizionam-panjakana Malagasy – Valam-bahoaka
Ankoatra io teboka io anefa, mpitranga eto Madagasikara ny fandrombaham-pahefana na tamin'ny alalan'ny fidinana an-dalambe na/sy tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana ara-miaramila, ary in-dimy izany hatramin'ny 1972, miaraka tamin'ny farany indrindra tamin'ny 2009.
Marina sy nalalaka tokoa ve ny fifidianana ho filoham-pirenena eto Madagasikara? Hitondra ho any amin'ny vanim-potoanan'ny fahavokarana sy ny fandriampahelamana eto amin'ny firenena ve izy ireny?
Efa-taona no niandrasan'ny maro tato amin'ny firenena sy ny sehatra iraisampirenena ny fifidianana. Raha nisy ny fandikan-dalàna nandritra ny androm-pifidianana, araka ny voahangon'ny mpanaramaso ny fifidianana natsangan'olo-tsotra azy ao amin'ny Andrimaso sy ny Zahavato, dia tsy ampy hanafoanana ny fifidianana ny hamaroany.
Saingy, misimisy ihany ny zava-mitranga sasantsasany mampiahiahy indrindra fa talohan'ny fotoanan'ny fifidianana. Voalohany amin'izy ireny nanesorana tsy hifidianana ny filoha nesorina Marc Ravalomanana, ny vadiny Lalao Ravalomanana, ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka ary ilay nanao ny fanonganam-panjakana Andry Rajoelina.
Ao amin'izay zava-nitranga ho arahina amin'ny fifidianana manaraka, ny nanakanana tsy hampifaninana an'i Didier Ratsiraka sy Lalao Ravalomanana, noho ny fepetran'ny faharetan'ny fonenana teto an-tanindrazana, rehefa nialokaloka tany Frantsa sy Afrika Atsimo ho azy ireo, sy voasakana tsy hody an-tanindrazana. Tsy hita ao amin'izany veilively ny mariky ny fahaterahan'ny demokrasia.
Nametraka ny firotsahany hofidiana tamin'ny fotoana farany i Andry Rajoelina, ary dia voasakana tsy hahazo hifaninana ihany koa. Nametraka izao fanazavana manaraka izao ny ONG Verified Voting:
Nilaza ny fitsarana fa tsy nahafeno ny fepetra nonenana ara-batana hirotsahany ho filoha na Ravalomanana na Ratsiraka. Niaina an-tsesintany tany Afrika Atsimo Ravalomanana, raha mbola tsy nonina naharitra teto amin'ny nosy hatramin'ny nandosirany ho any Frantsa tamin'ny 2002 Ratsiraka.
Nilaza ny fitsarana fa tsy nandrotsaka ny firotsahany ho kandida tao anatin'ny fotoana voatondro Rajoelina. Nilaza Rajoelina fa tsy hifaninana amin'ny fifidianana amin'ity taona ity,saingy nametraka ny firotsahany indray tamin'ny Mey. Nilaza izy fa nanapa-kevitra ny hirotsaka satria mitovy amin'ny hoe firotsahan'ny vadiny ihany ny firotsahan'i Lalao Ravalomanana.
Nibaiko ny SADC, vondrom-paritra ahitana firenena 15, fa tsy mirotsaka na Ravalomanana na Rajoelina ho lalana iray famahana ny olan'ny saritaka politika eto Madagasikara. Tao anatin'ny savorovoro politika ilay nosin'ny mponina 20 tapitrisa hatramin'ny nandrombahan-dRajoelina ny fahefana tamin'ny2009.
Nanaiky ny tsy hirotsaka Ravalomanana tamin'ny desambra. Nesorina tao anatin'ny lisitra ihany koa ny kandida dimy hafa, araka ny filazan'ny fitsarana.
Faharoa, tamin'ny Novambra, nisy lalàna nolaniana mamela an'i Andry Rajoelina hanentana ho an'i Hery Rajaonarimampianina, na teo aza ny adidy ho an'ny filoha teo aloha, na voafidy ara-pomba demokratika na tsia, tsy hitongilana sy tsy hirotsaka an-tsehatra. Niahiahy ny bilaogera Malagasy iray ao amin'ny bilaogy iraisana Madonline fa suspected Rajoelina also had a nifantina ny kandidà ho amin'ny fifidianana parlemantera [fr] izay niara-notontosaina tamin'ny fifidianana ho filoha ihany koa Rajoelina:
Izy no kandidà virtoaly sy manana ny heriny manontolo ao amin'ity fifidianana ity, satria mihalohalo na eo amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena na eo amin'ny fifidianana ho solombavambahoaka hatrany ny alony. Izy, dia i Andry Rajoelina mazava loatra no nanambara fa izy no nandrotsaka ny kandidà Hery Rajaonarimampianina mba ho lohalaharana amin'ny fihodinana faharoa mialoha ny hiterahany [hamoahany] ny kandidà 117 ho amin'ny solombavambahoaka. Tsia, tsy nandika lalàna izy satria nanovaova hatrany izany ho amin'ny tombontsoany. Amin'ny alalan'ny didy hitsivolana raisina mandritra ny filankevitry ny minisitra i Andry Rajoelina no nanapa-kevitra fa afa-manatrika mivantana sy eny amin'ny fitaovam-pifandraisan'ny kandidà. Amin'ny mahafilohan'Andrimpanjakana azy, dia nanafaka ny tenany tsy hitandro ny tsy fitongilanana izy sy ny tokony hipetrahany mangina araka ny voalazan'ny Tondrozotra.
Fahatelo, misy ny marika sasantsasany fa mety mikasa ny hametraka ny tenany ho praiminisitra [fr] araka ny fanaon'i Vladimir Putin nandritra ny fitondran'i Medvedev [i] Rajoelina, mety ho lasa aloha loatra ny filazana fa niverina ho amin'ny lalana mankany amin'ny demokrasia i Madagasikara, araka ny fanazavan'i Tsimok'i Gasikara azy:
Ny tobin'ny filohan'ny tetezamita tsy voafidy Andry Rajoelina, izay hita fa hahazo ny filoham-pirenena eto Madagasikara, dia nanombana tamin'ny asabotsy, ny ampitson'ny fivoahan'ny vokatra vonjimaikan'ny fifidianana ho solombavambahoaka, fa mahazo ny maro an'isa ampy hanondroana ny praiminisitra manaraka. “Araka ny fanombananay, dia nahatafiditra depiote 53 izahay, saingy mety hahatratra hatrmin'ny 58 izany isa izany aorian'ny fanamarinana”, hoy i Jean de Dieu Maharante tamin'ny AFP. Maharante no filohan'ny vondrona kandidà mialokaloka ao anatin'ny loko Mapar, Mapar izay fanalavana ny hoe “Miaraka amin'ny Prezida Andry Rajoelina”.
Pikantsary ahitana an'i Hery Rajaonarimampianina sy i Andry Rajoelina nandritra ny fanentanana hampifidy filohampirenena. Avy amin'i Mandimby Maharo nahazoana alalana
Nandritra ny fifidianana, maro ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny fahamendrehana nitranga. Ny voalohany amin'izany ny fisian'ny mpifidy 140.000 fanampiny ao anatin'ny lisitra tanelanelan'ny fihodinana voalohany sy faharoa izay tsy voazava. Iza no mahalala hoe firy ny mpifidy nesoka tsy navela hanatontosa ny zony hifidy?
Zavamisy hafa tsy voazava sady manaitra ihany koa ny tsy fahafantarana ny niavian'ny vola nampiasaina hanaovana propagandy. Niraradraraka avy amin'ny andaniny sy ny ankilany avy ny vola nandritra ny fanentanana [fanazavan'ny mpandika lahatsoratra: fampielezan-kevitra moa no fiteny mahazatra saingy izany tokoa ve no naely?]. Tsy mipetraka ny lalàna famerana ny tetibolam-panentanana. Mba hanaovana ny fampitahana, tsara ny manamarika fa mihoatra ny 90 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara no zara fa velomin'ny vola latsaky ny roa dolara US isan'andro. Na izany aza anefa, Rajaonarimampianina dia nisy nitatitra fa nandany vola 43 tapitrisa dolara US [fr]:
Noho ny fananany tahirimbola enti-miady mitentina 43 tapitrisa US dolara, izay heverina ho ny tetibolam-panentanana ho amin'ny fifidianana lehibe indrindra, dia afa-nametraka ny solontenany nanerana ny nosy manontolo izy.
Malaza ihany koa, kandidà iray hafa tsy nahazo fahombiazana, Camille Vital, dia nahita ny fanomezana fiara tsy mataho-dalana 350 azony tafahitsoka tao amin'ny seranan'i Toamasina. Taorian'ny fifidianana i Vital izay praiminisitr'i Rajoelina teo aloha, izay nanohana an'i Robinson nandritra ny fihodinana faharoa, dia tsy navela handao an'i Madagasikara. Izany fanohintohinana hafa izany indray dia marika fa mety ho tsy feno ny fahatongavan'ny demokrasia eto Madagasikara [fr], araka ny Malango actualité:
Tamin'ny faran'ny volana Septambra, fiara tsy mataho-dalana 350 no nahitsoka tao amin'ny seranan-tsambon'i Toamasina, sy t-shirt misy ny sariny an-hetsiny. Ny antonta-taratasy natolotra no nanaitra ny ahiahin'ny fadin-tseranana izay nitaky fanazavana. Araka ny filazan'ilay kandidà, dia fanomezana tsy averina sy tsy misy takalony avy amin'ny namana vahiny iray resy lahatra tamin'ny fandaharan'asany miompana amin'ny famerenana haingana ny fandriampahalemana eto amin'ny firenena io.
Maro ny famantarana fa sempotry ny fahalavan'ny krizy ny olona. Hoy ny tatitra ao amin'ny All Africa:
Mety ho leon'ny fifandirana politika tsy mety tapitra ihany koa ny olona. Marika sasantsasany amin'izany, sy fahadisoam-panantenan'ny olona amin'ny fitondrana ankehitriny, ny fahambanian'ny taham-pandraisana anjaran'ny fifidianana tamin'ny volana desambra, izay zara raha nihoatra ny 50%.
Nilaza i Paul-Simon Handy, Lehiben'ny Diviziona Mpanadihady ny Risika sy ny Fisorohana ny Fifandirana ao amin'ny ISS, fa fampahatsiahivan'ny vokatry ny krizy hafa eto amin'ny firenena leon'ny gidragidra politika ny fahambanian'ny taham-pandraisana anjara tamin'ny fihodinana faharoa.
‘Na dia tian'ny tian'ny vahoaka aza ny hisian'ny governemanta ara-dalàna, dia leon'ny fifandirana politika tsotra izao ry zareo ary hitan-dry zareo fa fampifandimbiasana ireo avy amin'ny vato nasondrotry ny tany ara-politika efa nisy ihany atolotra ho kandidà.’
Andro iray monja taoria'ny nanambarana ny fandresen'i Rajaonarimampianina dia nianto ho amin'ny fihetsiketseham-panoherana sahady i Robinson:
Miantso ho amin'ny fanaovana fihetsiketsehana lehibe ao amin'ny kianjan'i Magro @DrRobinsonJL rahampitso ! ary mitaky ny hanaovana fampitahana ny voka-pifidianana.
Mitodika any amin'i Rajaonarimampianina ny mason'ny rehetra hijery raha sy ahoana ny ataony hanatontosany ny nampanantenainy nandritra ny fanentanana hamerina ny fitoerana tsara sy hiarahany miasa amin'ny vahoaka hanesorana an'i Madagasikara hiala amin'ny fahantrana. Tompon'ny tenany ve Rajaonarimampianina, ary afa-mijoro amin'ny heviny manokana, na dia eo aza ny fahitana azy ho akaiky an-dRajoelina? Mendrika governemanta sy filoha mahafantatra fa voafidin'ny 25 isanjaton'ny nisoratra hifidy monja ny vahoaka Malagasy izay midika fa mila miasa miaraka amin'ny vondrona hafa izy, mampihavana ny vahoaka Malagasy rehetra, ary tsy hiditra amin'ny tranga nataon'i Putin.
Raha mandinika ny tantara dia voalohany Madagasikara manana filoha teknisianina.
Fa ny olana dia teknisianina voafatotry ny dahalo ambony latabatra izy satria niara-petsapetsa tao na opérateurs économiques gasy sy vazà io na mpitondra fanjakana (Affaires bois de rose, BNI, gabegie nandritry ny transition, etc..), voafatotry Rajoelina sy ny Miaramila niaro ny transition … est-ce un homme libre??
Manarak’izany, raha mamaky tsotsotra ny sari-tany nahalany azy, kely ny finoana fa filoha tsy nolanian’Antananarivo dia aharitra ela eo.
21 Janoary 2014, 12:24